Farmaajo oo shir ugu yeeray madaxda maamul goboleedyada - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaFarmaajo oo shir ugu yeeray madaxda maamul goboleedyada
June 14, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shir ugu yeeray madaxda maamul goboleedyada, sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada maanta oo Axad ah.
“Shirkan ayaa ku saabsan sidii wadatashiyo ballaaran looga yeelan lahaa geeddi socodka doorashooyinka dalka, arrimaha amniga, dagaalka ka dhanka ah kooxaha argixisada, dhammeystirka dib u eegista dastuurka iyo horumarinta dhaqaalaha dalka.” Ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka.
Lama sheegin wakhtiga rasmiga ah ee la qaban doono shirka balse waxaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in guddiyo farsamo oo ka socda dhinacyada ka qeybgali doona ay ka soo shaqeyn doonaan.
Shirkan ayaa imaanaya iyadoo maanta wefdi uu hoggaaminayo Madaxweyne Farmaajo ay u safrene dalka Jabuuti halkaas oo la filayo in wadahadalo kula yeelan doonaan maamulka Somaliland.
Asbuucii la soo dhaafay, Puntland ayaa soo dhaweysay baaq ka soo baxay guddoomiyaha aqalka sare ee Dowladda Federaalka Soomaaliya oo sheegaya in la qabto shir wadatashi oo u dhaxeeya dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe.
Xiriirka u dhaxeeya Dowladda Federaalka iyo qaar katirsan maamul goboleedyada ayaa xilliyadii u dambeeyay aad u xumaa.
Tokyo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qeybgalay shirka iskaashiga Japan iyo Afrika oo maanta oo Arbaco ah ka furmay caasimada Japan ee Tokyo. Shirka oo saddexdii sannoba mar la qabto, [...]